Inona ny fanahiana momba ny Zoom? Ahoana no hiatrehana ny adin-tsaina amin'ny vidéo - Wellness | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fahasalamana Mpanao Gazety Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Wellness Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Lalao Orinasa, The Checkout Orinasa, Vaovao Zava-Mahadomelina Vs. Namana Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana
Tena >> Wellness >> Efa nahatsapa fanahiana tamin'ny fihaonamben'ny horonantsary ve ianao? Ireto misy fomba 4 hiatrehana
Efa nahatsapa fanahiana tamin'ny fihaonamben'ny horonantsary ve ianao? Ireto misy fomba 4 hiatrehana
ny Valan'aretina covid-19 nanova ny fomba fifandraisan'ny olona. Ny teknolojia (toy ny resaka an-tsary sy ny antso amin'ny kaonferansa) dia manamora ny fijanonana amin'ny fifandraisana, saingy mety hahatsapa ho tsy voajanahary sy tsy mahasalama ihany koa izy io rehefa manolo ny fifandraisan'ny olona. Ho an'ny sasany, ny fanerena hanao fiaraha-monina na amin'ny sehatry ny asa amin'ny alàlan'ny fihaonambe amin'ny horonantsary dia mety hiteraka fahatsapana ho may sy ho reraka ary ho fanahiana mihitsy aza.
Inona ny momba ny Zoom izay mety hiteraka fahatsapana fanahiana?
Zoom, Google Hangouts, FaceTime — nanjary fitaovana ilaina ho an'ireo miasa ao an-trano mandritra ny areti-mandringana COVID-19 ny kaonferansa video. Nampiasaina koa izy ireo mba hampianarana, hifaneraserana, ary ho fomba iray hanatrehanay amin'ny fomba saika hetsika toy ny mariazy, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ary na dia ny fandevenana aza. Mpanome tolotra fitsaboana maro no nampahery fanendrena telehealth koa. Na izany aza, io fifandraisana amin'ny Internet io dia mety hisy fatiantoka ratsy.
Ny fifanakalozan-tsary dia mila fifantohana bebe kokoa noho ny resaka mifanatrika, hoy izy Zlatin Ivanov , MD, mpitsabo aretin-tsaina any New York City. Mila hery bebe kokoa isika hanodinana ireo mari-pamantarana tsy am-bava toy ny endrika ivelany, ny feony sy ny feon'ny feo ary ny fitenin'ny vatana; mandany hery bebe kokoa amin'ireo ny fandinihana bebe kokoa an'ireo.
Io angovo mety efa tsy ananantsika io, noho nanampy adin-tsaina izany dia mety ho tonga amin'ny areti-mandringana.
Miakatra ny tebitebinay rehefa tsy maintsy mifantoka amin'ny olona dimy amin'ny fotoana iray miaraka isika amin'ny fijerena galeriana, hoy ny Dr. Ivanov. Indraindray, sarotra kokoa ny mahatakatra ireo mpiara-miasa aminao, namanao, mpiara-miasa aminao noho ny olana amin'ny fifandraisana na ny lantom-peony. Antony iray hafa hahatsapantsika fanahiana ny tsy maintsy hahafantarantsika haingana ary hananantsika fahaiza-manao amina sehatra antso an-dahatsary maro hafa— Zoom, GoToMeeting, Skype, sns. Amin'ny teny hafa, ireo olana ara-teknika atahorana dia afaka manampy ahiahy fanampiny amin'ireo ahiahy ara-tsosialy. .
Ho fanampin'izany, mahazatra ihany koa ny manahy momba ny fomba fahitana anao amin'ny webcam, na ny adin-tsaina noho ny maha fotogogène anao. Betsaka ny olona no mibanjina ny tarehiny eo amin'ny efijery imbetsaka noho ny hoe tsy maintsy mijery fitaratra isan'andro izy ireo — ary mety hiteraka olana momba ny fiheveran-tena momba ny fisehoana izany.
Iza no tena tratry ny tebiteby amin'ny valan-dresaka amin'ny video?
Ny valanaretina COVID-19 dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa noho ny fahasalamanao ara-batana. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao ara-tsaina koa izany rehefa mahatsapa fihenjanana sy fiasan-doha ateraky ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fitokana-monina. Fianarana iray nahita fa ny adin-tsaina mitoka-monina mandritra ny fotoana maharitra dia miteraka risika lehibe amin'ny aretin'ny neuropsychiatrie toy ny aretin'ny fahaketrahana sy ny tebiteby. Ny fifampiresahana an-tsokosoko sy ny fihaonambe an-tsarimihetsika dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fahatsapana ho manirery, saingy mety hampitombo ny fanahiana amin'ny olona sasany izany. Ireo izay matetika tratry ny tebiteby Zoom dia mety ahitana olona tsy mahazatra ny teknolojia, ary koa ny Olon-dehibe 15 tapitrisa izay miaina amin'ny fanahiana ara-tsosialy isan-karazany.
Olona sahirana amin'ny haitao
Araka ny Hong Yin, MD , mpitsabo aretin-tsaina any Wisconsin ao amin'ny New Frontiers Psychiatric & TMS, ireo izay mety tsy dia mahazatra loatra amin'ny fampiasana teknolojia matetika dia matetika no voakasik'izany. Mety hahatsapa ho mavesatra ho an'ny maro ny mandray endrika fifandraisana teknolojia vaovao. Ny fiovana, amin'ny ankapobeny, dia mety hiteraka tebiteby satria tsy fantatra loatra amin'ny zavatra fantatsika izany ary manana ny fahitana ny fandehany teo aloha, hoy ny Dr. Yin. Tianay ny matoky tena sy mahay ary ny miala eo ivelan'ny faritra misy anay dia afaka manimba izany vetivety.
Ireo manana aretina mitebiteby efa misy
Ny fihaonambe amin'ny horonantsary dia mety ho fanamby ho an'ireo izay efa miady amin'ny endrika fitaintainanana isan-karazany. Ny isan'ny mponina dia olona izay manana endrika fitaintainanana (indrindra ny tebiteby ara-tsosialy) na manana fiasa sasany izay mialoha azy ireo amin'izany, hoy ny Dr. Yin. Ampidirin'izy ireo ny olona mirona amin'ny eritreritra loatra, indrindra momba ireo zavatra mety tsy mety nefa tsy ampy soritr'aretina hahatratra ny mason-tsivana amin'ny fikorontanana ara-dalàna. Mety hisy fiatraikany amin'ny olona miaina miaraka amin'ny aretim-panafody, fahaketrahana ary toe-pahasalamana hafa koa izany.
Amin'ny ankapobeny, Dr. Yin dia nanamarika fa rehefa miresaka momba ny fanahiana Zoom, dia mazàna misy kofehy / lamin'ny fahatsapana tena-tena na momba ny bika aman'endrika na ny fahaizana ambany kokoa hianarana ny teknolojia.
Ahoana no ahafahantsika manao izay hahatonga ny Zoom tsy ho sadaikatra sy tsy hampitahotra loatra?
Ny vaovao tsara momba ny tebiteby Zoom dia misy dingana vitsivitsy azonao atao hiadiana aminy.
1. Fiatoana amin'ny fandaharam-potoana
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fandinihana tsara ireo fanaonao mahazatra sy ny famolavolana ny fotoana fialan-tsasatra amin'ny fivoriana mandritra ny andro sy ny fotoana ialananao, hoy ny Dr. Ivanov. Ny fialan-tsasatra tsy hibanjina efijery iray dia tsy vitan'ny misoroka ny fandoroana an'i Zoom, fa ilaina ihany koa amin'ny fahasalamantsika ara-batana sy ara-tsaina.
Rehefa manamboatra ny fandaharam-potoananao dia aza atao averina ambadika any aoriana ny fotoana natokana ho anao - avelao fotoana kely eo anelanelanao hahafahanao ‘miaina’, manamboatra sy miomana amin'ny manaraka, hoy ny dokotera Dr. Ivanov. Mitsangàna amin'ny seza misy anao, ahinjiro, manondroa ny zavamaniryo, alao ny alika na saka anao. Omeo fotoana ny atidohanao hanova fitaovana eo anelanelan'ny fivoriana. Ara-dalàna ihany koa ny famonoana ny fakantsarinao mandritra ny minitra vitsy mandritra ny fivoriana iray, raha mila izany ianao.
2. Zarao ny fanahianao
Manolo-kevitra i Dr. Yinmiresaka amin'ny olon-kafa nanandrana izany ary nitebiteby momba izany koa satria araka ny nambarany dia ho tsapanao fa tsy irery ianao ary maro no manana traikefa mitovy amin'ilay fitaintainanana sy fanamaivanana ary fanomezan-toky azo avy amin'ny famitana ny fahombiazanao voalohany fihaonambe
Mifandraika: Inona no atao hoe teléréapy?
3. Mahazoa fiofanana
Raha mahatsiaro tsy matoky tena ianao amin'ny fahaizanao mitety an'io karazan-pifandraisana io dia mangataha fanampiana. Ny orinasanao dia mety manolotra horonan-tsary fampiofanana vitsivitsy, na antso an-tariby miaraka amin'ny solontenan'ny Zoom izay afaka manazava ny fomba fampiasana ilay sehatra. Rehefa matoky tena amin'ny fahaizanao mampiasa ilay programa ianao dia hanomboka hihena ny adin-tsainao.
4. Mametraha fetra
Fanampin'izany, nilaza i Dr. Yin fa tsara ny manonona ny safidinao amin'ny Zoom amin'ireo mpiara-miasa aminao, toy ny fampiasana ny endrika audio raha tsy misy ilay horonan-tsary.99/100 ny audio no ilainao raha tsy ianao no mpanolotra, mpampiantrano na mampiseho sary amin'ny mpandray anjara rehetra, ka ireo olona manatrika bebe kokoa dia tsy mila manana ny fakantsariny, hoy izy.
Nanjary fitaovana sarobidy nandritra ireo fotoana nisian'ny elanelana ara-tsosialy ireo kaonferansa horonantsary zoom, saingy zava-dehibe ny mahatadidy fa tsy hiantehitra amin'izy ireo mandrakizay isika. Ny fandraisana dingana tsotra dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny havizanan'ny havizanana sy ny fitaintainanana mety haterak'izy ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana (sy fampiasana) lisitra fizahana fikarakarana tena
misy fanafody voajanahary amin'ny holatra toenail
inona no heverina fa tazo amin'ny olon-dehibe
ativan, valium ary xanax dia
inona ny siramamy ra mahazatra ho an'ireo tsy diabetika
inona no mahazatra ny siramamy amin'ny rà
inona ny doka amin'ny viagra tokony horaiko